Nka na ụzụ University of Berlin - Study Engineering na Germany
Nka na ụzụ University of Berlin
Nka na ụzụ University nke Berlin Nkọwa
Students (ihe ruru.) : 3200.
Echefukwala atụle Technical University of Berlin
Idebanye aha na ụzụ University nke Berlin
Na ọ fọrọ nke nta 34 000 ụmụ akwụkwọ, n'ihe dị ka 100 N'ezie àjà na 40 Institutes, ahụ mere ihe akụkọ na ụzụ University of Berlin bụ otu n'ime Germany kasị ukwuu na nke kasị mba a ma ama oru mahadum. Emi odude ke Germany bụ isi obodo - na obi Europe - gbara ọkpụrụkpụ na nnyocha na izi, netinye nkà ndị magburu onwe agụsị akwụkwọ, na a oge a ọrụ na-abara ochichi mara nka na ụzụ University of Berlin.
The nso nke ọrụ awa site anyị asaa ezi ikike iche na-eje ozi zụlite a pụrụ iche njikọ n'etiti eke na oru sayensi n'otu aka, na na atụmatụ, akụnụba na-elekọta mmadụ na sayensị na Humanities na ndị ọzọ. Nke a bụ n'ezie a ịrịba nweta ihe ọ bụla nka na ụzụ University.
Ndị a ọzụzụ chọta ihe okwu na gburugburu 40 Bachelor si na 60 Master mmemme. Ọtụtụ n'ime ndị a bụ, n'ezie, pụrụ iche. Nka na ụzụ University of Berlin bụ nanị mahadum na isi obodo ógbè àjà engineering achị.
Dị otú ahụ na nkà mmụta sayensị archivements na-wuru na isi nnyocha na eke na sayensị ọzụzụ nke onwu na physics, na mgbakọ na mwepụ, na mgbakwunye na ike ọhụrụ na-edebere ndị nnyocha na ọkụ eletrik na kọmputa sayensị ihe atụ. Tu Berlin natara ude n'ihi gbara ọkpụrụkpụ na ndị a niile ọzụzụ, n'ihi na nke na-akwado na-nye site na Ọkasị Initiative nke German Federal na State ọchịchị, ndị German Research Foundation (DFG), na European Union, ụlọ ọrụ na ọha ego, na onye ìgwè na-eduzi ụwa-klas research.
One doro anya nke na-egosi na mahadum ịrụ ọrụ na ike mmepe bụ abawanye na mpụga ego maka ya nyocha oru ngo si gburugburu 125 nde euro na 2009, ka n'ihe dị ka 179 nde euro na 2014. n'ihi na afọ, Tu Berlin e họọrọ dị ka otu n'ime top mahadum na Germany na-enweghị a ọgwụ na ụlọ akwụkwọ.
Na a doo anya articulation nke na ụzụ University of Berlin ebumnobi, na July 2012 Ọmụmụ maka otu ihe ji otu olu kpebiri ifịk ifịk na-akwalite a ọhụrụ ọhụụ na nnyocha na mmụta site e isii isi research-ebute ụzọ na site n'ịkọwapụta yiri competencies na-elekọta mmadụ ọrụ.
Ngwọta n'ihi na societal Challenges.
Anyị Key Ngwa Areas
Materials, Imewe na n'ichepụta
Energy Systems na Sustainable Resource Management
Infrastructure na Agagharị
Ihe ọmụma na Communication Systems
Planning na Management
Beneficial Filiks na Products
Education na Ịmepụta New Job Areas
asọmpi iru eru
A emeri na ngalaba oru iwu ana achi achi adigide ọganihu nke ọkaka na mkpa diciplines.
Beyond ya n'ókè-ala, ma domestically na ná mba ọzọ, anyị mahadum bụ moto, initiator na-erite uru ná ọtụtụ agụmakwụkwọ na ọrụ netwọk na mmekọ na nkà mmụta sayensị na ụlọ ọrụ. Strategic njikọ aka na ọtụtụ mmalite-elu ihe omume na-eje ozi iji na-akwalite aka-na ihe ọmụma na nkà na ụzụ nyefe.
Global Player dị ka Siemens, German Telekom, Daimler, Vattenfall
ma ọ bụ E.ON na-arụ dị iche iche na ngalaba-ịkpa oru ngo na anyị mahadum na ifịk ifịk na-akwalite nkà na ụzụ na ihe ọmụma nyefe. The 14 nyere oche na ọtụtụ mmekọ institutes na-ncheta nke tu Berlin magburu onwe extramural aha. Companies bụghị naanị na investments, ha na-enye aka-na ọzụzụ na-akwado ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na scholarships, okwu ihu ọha usoro, na magburu onwe ọrụ ohere na-agụsị akwụkwọ. The Deutsche Telekom Innovation Laboratories bụ otu ihe atụ pụtara ìhè nke ndị dị otú ụka n'Ịntanet. Ha ozi bụ na-akpa àgwà nnyocha maka telekomunikashions ụlọ ọrụ na ha ịkwado ọtụtụ tu Berlin oche. The tu Campus kemgbe obibi na 'Labs' ụlọ ebe 2004, ebe gburugburu 360 ọkachamara na ndị ọkà mmụta sayensị si ihe karịrị 25 mba na-arụ ọrụ n'okpuru otu ụlọ.
Dị ka ihe dị mkpa omee na Berlin na Brandenburg ụwa-klas na nkà mmụta sayensị na gburugburu ebe obibi, Tu Berlin bibiri ndị na-akwalite nkà mmụta sayensị na ịkparịta ụka n'Ịntanet. Na mgbakwunye na ha na mbụ agụmakwụkwọ omume, gburugburu 60 nke anyị n'elu-notch na-eme nnyocha egosipụta nlekọta ọrụ na extramural nnyocha institutes. Ndị a gụnyere ndị Fraunhofer Society, na Leibniz Association, na Helmholtz Association na ndị ọzọ dị mkpa na n'ihu ọha-kwụrụ ụgwọ nnyocha ụlọ ọrụ.
The Nka na ụzụ University of Berlin attaches oké mkpa iji na nkwalite nke sayensị dabeere na mmalite-acha ọkụ na atụ ogho-offs site n'inye nduzi na-elekọta ruo ihe na 40 amalite-elu, atumatu kwa afọ. Ọ na-eje ozi dị ka a magnet n'ihi na ụlọ ọrụ nwere mmasị na-ehiwe onwe ha ma ọ bụ nso anyị campus. Dabere na ihe a mba competi-u anyị riteworo n'ụgwọ aha ahụ bụ "adị amalite-elu mahadum".
Internationalization bụ a Iwu nke sayensị niile eme. The mahadum internationalization atụmatụ agbaso echiche nke usoro mmekọrịta na n'elu-notch mahadum ná mba ọzọ. Ndị a gụnyere tu Warsaw, tu Trondheim, Tu Delft na tu Vienna. Ndị a mmekọrịta na-eje ozi na-agba ume sara dabeere na imekọ ihe ọnụ ma na-akwalite iche iche nkwonkwo-eme nnyocha na izi. A n'ihu ụlọ ngọngọ mejupụtara usoro imekọ ihe ọnụ na nkà mmụta oru na atọ iche n'ógbè Eastern Europe, South-East Asia na South America. Tu Berlin ugbu a na awade 26 sọrọ-ogo mmemme na njikọ na ibe mahadum England, France, Poland, China, Russia na Chile, na mgbakwunye na 17 English-asụsụ nna ukwu mmemme. International ụmụ akwụkwọ si karịa 130 mba-emejupụta ihe 20 percent nke na-amụrụ ahu. Na Alexander von Humboldt ọkwa, Tu Berlin ugbu a kwubara otutu nke abụọ n'ime ndị niile na oru mahadum. Ndị ọzọ ọnụ ọgụgụ n'ihu emesi mahadum interna-u obibia: Tu professors naanị socha 1500 cross-ókè Cooper-ation oru n'etiti 2009 na 2011. na 2012, gburugburu 120 mba sayensị nkwekọrịta bụ na ike na Central mahadum larịị.
Mathematics na eke na sayensị
Usoro sayensị na injinịa
Ọdụdọ engineering na kọmputa sayensị
Mechanical engineering na iga usoro (tinyere aerospace engineering, akpakanamde engineering, naval na oké osimiri engineering, na atụmatụ na ọrụ nke iga usoro)
Planning - ewu - na gburugburu ebe obibi (jikọrọ ọnụ nke mbụ n'ụlọ akwụkwọ nke “obodo injinịa na etinyere geosciences” na “ije -environment - otu”)
on 1 April 1879, na Royal Institute of Technology Charlottenburg (“þ Charlottenburg”) e guzobere ọchịchị mmakọ nke Berlin Building Academy (Bauakademie) na Royal Trade Academy (Royal Gewerbeakademie), abụọ nọọrọ onwe ha Prussian tọọ ntọala kọleji ike 1799 na 1821 karị. The þ Charlottenburg (Royal TechnicalHigher School of Charlottenburg) aha mgbe na ediwak owo ẹdude nke ya na ọnọdụ na Charlottenburgjust n'èzí Berlin. na 1899, na þ Charlottenburg ghọrọ ndị mbụ Polytechnic na Germany awarding doctorates, dị ka a ọkọlọtọ ogo maka na-agụsị akwụkwọ, na mgbakwunye na diplọma, ekele prọfesọ Alois Riedler na Adolf Slaby, onyeisi oche nke Association of German Engineers(VDI) na Association for Ọdụdọ, Electronic na Ozi Technologies (VDE).
na 1916 ogologo eguzo Mining Academy Berlin, na Prussian Ngwuputa mmuta kere site geologist Carl Abraham Gerhard na 1770 na behest nke King Frederick Ukwu, E webatara n'ime þ Charlottenburg. tupu, Ngwuputa mahadum ama, Otú ọ dị, ruo ọtụtụ iri afọ n'okpuru nkwado nke Frederick William University (ugbu a Humboldt University of Berlin), tupu e ua ọzọ na 1860. Mgbe Charlottenburg si absorption n'ime Greater Berlin na 1920 na Germany na-ghọọ Weimar Republic, na þ Charlottenburg e renamed “Technische Hochschule nke Berlin” (“þ Berlin”). na 1927, Ngalaba Geodesy nke Agricultural College of Berlin e webata þ Berlin. N'oge 1930s, na redevelopment na mmụba nke campus tinyere “East-West axis” bụ akụkụ nke Nazi atụmatụ nke a World Capital Germania, tinyere a ọhụrụ ngalaba ozize technology n'okpuru General Karl Becker, wuru dị ka a akụkụ nke ndị ka agụmakwụkwọ obodo (University City) na n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke maara ihe Grunewald ọhịa. Shei ewu nọgidere emechaghi mgbe Agha Ụwa Mbụ tiwapụrụ II na mgbe Becker si igbu onwe 1940, ọ na-taa kpuchie site nnukwu-ọnụ ọgụgụ Teufelsberg dumping.
Ugwu na ngalaba nke isi ụlọ nke mahadum e bibiri n'oge a bọmbụ wakporo na November 1943. N'ihi na n'okporo ámá fightingat ọgwụgwụ nke Agha Ụwa nke Abụọ, arụmọrụ na þ Berlin A kwụsịtụrụ ka nke April, 20nke 1945. Eme atụmatụ maka re-oghere nke ụlọ akwụkwọ ahụ malitere na June, 2nd 1945, ozugbo eme rectorship edu Gustav Ludwig Hertz na Max Volmer a họpụtara. Dị ka ma Hertz na Volmer nọgidere n'ala ọzọ na Soviet Union ruo oge ụfọdụ na-abịa, na mahadum e re-eguzobe ruo April, 9nke 1946, ugbu a kpọkwasịrị aha “Nka na ụzụ University nke Berlin”. N'izugbe, na aha na-abụghị sụgharịa n'asụsụ ndị ọzọ. The English okwu Berlin Institute of Technology bụ a ọkara ukara translation, bụ nke e guzobere dị ka a ikwere na 2007. Otú o sina, na kensinammuo translationNka na ụzụ University of Berlin anọgide kasị nkịtị (ezie na ọ bụghị ukara) aha maka mahadum na English, na o kwere omume, ma e wezụga nke ndị obodo German nkọwa (na N'ezie obere ụdị tu Berlin).
Ị chọrọ atụle Technical University of Berlin ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
Nka na ụzụ University nke Berlin na Map
photos: Nka na ụzụ University of Berlin ukara Facebook
Nka na ụzụ University nke Berlin reviews
Jikọọ na-atụle nke nka na ụzụ University nke Berlin.